काठमाडौं उपत्यका कोरोना ‘हटस्पट’ ! यी ठाउँहरुमा फैलियो धेरै कोरोना – Khabar Silo
काठमाडौं १६ कार्तिक / संघीय राजधानी काठमाडौंसहित सहरी क्षेत्रमा कोरोना भाइरस व्यापक रूपमा फैलिएको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)ले हालै गरेको सेरो प्रिभिलेन्स सर्भेले सहरी क्षेत्रमा समुदायमै संक्रमण फैलिएको देखाएको छ। त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका ‘हटस्पट’ बनेको छ। उपत्यकामै कुल संक्रमितको संख्या ७६ हजार ३ सय ४८ पुगेको छ
महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले सहरी क्षेत्रमा सबै उमेर समूहमा संक्रमण देखिएको बताए। ‘सबै उमेर समूहमा संक्रमण देखिनु समुदायमा संक्रमण भएको सूचक हो’, निर्देशक डा. पाण्डेले भने, ‘बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धामा समेत संक्रमण देखियो।’
मुलुकभर शनिबार २ हजार ५ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये महिला ९ सय ७६ र पुरुष १ हजार ५ सय ३२ जना छन्। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या १ लाख ७० हजार ७ सय ४३ पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार २ सय ६४ जना निको भएका छन्। त्यसैगरी, थप १७ जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ सय ३७ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार २ सय ७९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो।
मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३८ हजार ५ सय ८४ छ। काठमाडौं उपत्यकामा २० हजार ३ सय ४४ जना सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौं जिल्लामा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ हजार ८ सय ९० पुगेको छ। याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।
Posted on July 9, 2021 July 9, 2021 Author khabar silo
नायिका तथा निर्मात्री जेनी कुँवरले देहत्याग गरेकी छिन् । प्रहरी वृत्त, बानेश्वरका डीसएपी मिमबहादुर लामाका अनुसार, उनले आफू बस्दै आएको काठमाडौंको थापागाउँस्थित सनराइज सिटी अपार्टमेन्टमा झु’न्डि’ए’र देहत्याग गरेकी हुन् । ढोकामा किला ठो’के’र डो’री’को पा’सो ला’गे’को अवस्थामा जेनीको शव भेटिएको प्रहरीले बताएको छ । उनी विगत एक वर्षदेखि डि’प्रे’श’न’मा थिइन् । जेनी विगत केही समययता […]
२४ घण्टामा १७१ जना कोरोना संक्रमणमुक्त
काठमाडौं- पछिल्लो २४ घण्टामा थप १७१ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म १६ हजार ६६४ पुगेको छ । उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यसअघि सोमबारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या १६ हजार ४९३ थियो । मन्त्रालयका […]
उपत्यकामा घरमै बसेकालाई संक्रमण देखिने क्रम बढ्दो
Posted on August 31, 2020 Author khabar silo
कालीमाटीका एक २५ वर्षीय इन्जिनियर कोरोनाभाइरसको सन्त्रास फैलिएपछि चार महिनादेखि घरबाट बाहिर निस्केका थिएनन्। सावधानी अपनाएर बसेका थिए। तर, अचानक ज्वरो देखिएपछि उनलाई आशंका लाग्यो र जँचाए।रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनी आश्चर्यमा परेका छन्। ‘चार महिनादेखि बाहिर ननिस्किएको र सक्दो सावधानी अपनाएको मलाई कसरी संक्रमण देखियो। म छक्क परेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘मजस्तो घरमै बसेको […]
आफ्नो लक्की नम्बर कसरी थाहा पाउने ? यस्तो छ जन्म मिति अनुसार लक्की नम्बर थाहा पाउने तरिका